26 Martsa — Mankalaza ny Fanambarana ny Fahaleovantenany I Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Marsa 2018 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Raha mankalaza ny 26 Martsa, Andro nahazoany ny Fahaleovantenany i Bangladesh, tondraka lahatsoratra kosa ny tontolom-bolongana ao Bangladesh mitantara ilay Tetikady Searchlight natomboky ny Tafik'i Pakistana tamin'ny 25 Martsa 1971 tao anatina ezaka mamoy fo mba hanafoanana ny hetsika Nasionalista nataon'ireo Bengali.
Manome aina ny zava-nisy nandreraka nanamarika tamin'iny alin'ny 25 Martsa 1971 iny i Abul Bahar amin'ny alalan'ireto teny manaraka ireto:
Mirehidrehitra noho ireo olona 3 tapitrisa novonoina tamin'ny 1971 ny blaogera ankehitriny. Voatambatry ny sasany tamin'ireo blaogera Bangla tsara mihitsy ny Rakitr'ilay Fandripahana Faobe tao Bangladesh , mba hanairana ny mpampiasa aterineto amin'ny fiitaran'ny habibiana nataon'ny tafika Pakistaney, nanampian'ny Razakars, tamin'ny vahoaka Bengali. Tranonkala hafa vao nosokafan'ny blaogera ny Bangladesh 1971, izay mikendry ny hampifandray ny taranaka Bangladesh ankehitriny amin'ny fotoana sy ny fiainan'ireo olona niady ho an'ny Fahaleovantenan'ny firenena, sady manohy ny tsindry ataony amin'ny saim-bahoaka mba hiraketana an-tsoratra ireo nahavanon-doza.
Fa maninona no ilaina ankehitriny ny miaina ny tolona ho an'ny fahafahana? Angamba mba hisorohana ny ‘famadihana ho horonantsary Hollywood ny ady fanafahana’, toy ny voalazan'i Rasel. Hazavain'i Shamim ny antony mahatonga ny hoe taorian'izay taona marobe izay dia mbola ilaina foana ny tsy maintsy hitondràna ireo jiolahy an'ady ho eo anoloan'ny fitsarana. Milaza izy fa tsy noho ny valifaty akory izany fa toy ny fanamafisana ho amin'ny hoavy fa ilaina io ‘fitondràna ho eo amin'ny fitsarana’ io. Dingana ilaina ihany koa izany mba hiantohana ny rariny ary fiatoana ho an'ireo niharam-boina sy ireo fianakaviany sisa tavela.
Manoratra i fa amin'izao andron'ny Fahaleovantena izao dia tsy mahatsiaro aingam-panahy izy fa mahatsiaro fangirifiriana sy fahaketrahana rehefa mahita manodidina azy ny kolikoly sy ny fandresen'ny hery mpampisara-bazana, ny nofinofy hisianà Bangladesh mitambatra sy mahery ara-toekarena nivadika ho hadisoam-panantenana. Toa mizara io ratra io ny blaogera Shobjanta. Na izany aza, misinda ilay fahatsapana rehefa mihaino tsara ilay Hiram-pirenena ”Amar Shonar Bangla, ami tomay bhalobashi” izy (ry Bengal sarobidiko, Tiako ianao).